Chii chaungaona muSarlúcar de Barrameda | Kufamba Nhau
Lola curiel | | España, General, Beaches, Chii chekuona
Sanlúcar de Barrameda, iri pamberi peDoana National Park, Iri nderimwe remaguta anonyanya kushanyirwa pamhenderekedzo yeCádiz. Yaigara kubvira prehistoric nguva uye nekutenda kune yayo yakarongeka nzvimbo, yaigarwa neTartessos, yaive nzvimbo yekutanga imba ine mbiri imba yeMedina Sidonia, imwe yeakanyanya kukosha muSpain, uye yakasimbiswa senzvimbo yakakosha yekutengesa kunze. yezvinhu panguva yekoloni yeAmerica. Nhasi, migwagwa yayo inochengeta uye inoratidza iwo ese mazana emakore enhoroondo.
Tsika, nhoroondo uye hupfumi hweSarlúcar de Barrameda zvinoita kuti ive nzvimbo yakanaka yekushanyira pazororo. Mahombekombe, zviyeuchidzo, husiku husiku uye mabhawa kuti udye zvakanaka, ine zvese zvinodiwa kuti usakwanise kufinhwa. Kana iwe usingazive zvekuona uye zvekuita muSanúcar de Barrameda, haugone kupotsa iyi posvo kwaunowana imwe nyora nenzvimbo dzevashanyi dzinofarira dzinozove dzakakosha mukushanya kwako kune ichi chishongo che Cádiz.
1 Shanyira iyo Barrio Alto
1.2 Horo yeLa Merced
1.3 Basilica yeMukadzi wedu weRudo
1.5 Mukadzi Wedu weO Parish
1.6 Medina Sidonia Muzinda
1.7 Orleans-Bourbon Muzinda
1.8 Nhare yeSantiago
2 Mhenderekedzo dzakanakisa muSanúcar de Barrameda
2.2 Mahombekombe eLa Calzada neLas Piletas
2.3 Jara kumahombekombe
3 Iyo Plaza del Cabildo
4 Bonanza Musika
5 Shanyira iyo Doñana National Park kubva kuSanúcar
6 Flamenco muSarlúcar
6.1 Ndekupi kwandinogona kuona iyo flamenco show muSanúcar de Barrameda?
6.1.1 Zvichiri Hupenyu Kudzoka
6.1.2 Flamenco kirabhu Puerto Lucero
6.1.3 Rociera El Rengue Kamuri
7.1 Mamwe ma winery anoronga kushanya kune zvivakwa zvavo
8 Kwatinofanira kudya muSanúcar de Barrameda
8.2 Bhawa Casa Balbino
8.3 Betic Kona
Shanyira iyo Barrio Alto
Iyo Barrio Alto de Sanlúcar ndiyo yechinyakare chikamu cheguta, muMiddle Ages iyo yakamisa zvese zviitiko uye yakachengetedzwa nemadziro. Kufamba mumigwagwa yayo irwo rwendo rwechokwadi kune yakapfuura uye mukana wakanaka wekudzidza nezve kukosha kweguta remahombekombe senzvimbo yekutengeserana.
Zvivakwa zvechitendero, magadheni, winery uye dzimba dzehumambo, kona imwe neimwe ine nyaya. Tevere, ini ndinokuratidza izvo zvinomira zvaunofanirwa kuita parwendo rwako kuburikidza neBairro Alto.
Inowanikwa paCuesta de Belén, padhuze nePalacio de Medina Sidonia, Las Covachas kana Tiendas de Sierpes vaive vatengesi vekare musika. Nemhando yakatarwa yechiGothic, vakarairwa kuti vavake pakupera kwezana ramakore regumi nesere naDuke wechipiri weMedina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, mune mumwe wemigwagwa iyo, panguva iyoyo, yakaunza chikamu chikuru chechitoro cheSarlúcar chebhizimusi. Icho chivakwa chinokwezva kutarisisa kune yayo yakafara gallery yemaberere uye yakanaka frieze yakashongedzwa neRefresh of makava.
Horo yeLa Merced
Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX uye yaishandiswa senzvimbo yemamongi uye, gare gare, seyakaomarara. Kufanana nezvakawanda zvezvivakwa zvekare zveguta nezvivakwa, Horo yeLa Merced iri zvakare yakavakwa nekuda kwekubata kweiyo imba yakanaka yeMedina Sidonia.
Muma80s, imba yechisikigo yekare yaive mune yepamusoro mamiriro ekusagadzikana. Nekudaro, iyo XXI maDuchess eMedina Sidonia akafunga kupa iyo nzvimbo kuSanúcar City Kanzuru uye parizvino inoshanda seyemataundi horo yemahofisi uye dzimbahwe reE Delegation of Culture yeCity City uye Sanlúcar International Music Festival.
Basilica yeMukadzi wedu weRudo
Iyo Basilica yeWedu Mukadzi weCharity yakarairwa kuti ivakwe naVII Duke weMedina Sidonia. Basa rakatangira kubva muna 1609 kusvika muna 1613. Tembere iyi yaidzorwa nevakuru vezvitendero vakagadzwa nemba yakanaka.
Iyo Commission yakapihwa kuna Alonso de Vandelvira, mukuru dhizaini weCasa de Medina Sidonia, uyo akapa iyo nzvimbo tsvene neinooneka maitiro maitiro. Iyo yekumberi yechechi yakadzikama uye inosimbisa yakanaka bhero shongwe iyo korona yekunze. Mukati, dome rakapetana rinoita kuti mwenje upfuure nepaburi iro, riri pamusoro, rinovhenekera aritari huru.
Gedhi raRota yakanga iri imwe yemikova yeguta rekare, yakakomberedzwa neGuzmán el Bueno. Iro rine zita raro kune Panguva iyoyo kumadziro, nzira yaibatanidza Sanlúcar de Barrameda neRotmusha wakavakidzana. MuSarlúcar inozivikanwa se "The Arquillo" uye kuvakwa kwayo kwakatanga kubva muzana ramakore rechiXNUMX kusvika kune rechiXNUMX.
Mukadzi Wedu weO Parish
Iyo Parish yeMukadzi Wedu weO Ndiyo Greater Church yeSanúcar de Barrameda. Kuvakwa kwaro kwakatanga kubva muna 1603 uye kwakaitwa nekuda kwekubata kweyekutanga maDuchess eMedinaceli, Isabel de la Cerda y Guzmán, aive zvakare muzukuru waGuzmán el Bueno.
YeMudejar dhizaini uye rectangular chirimwa, iyo tembere inomiririra kune yayo dombo rejecha façade, yakafumiswa neanokudzwa majasi edzimba edzimba dzakanaka dzeGuzmán uye de la Cerda. Mukati, iyo Mudejar yakavhara siringi inobata maziso ese.
Medina Sidonia Muzinda
Imba yeMachinda eMedina Sidonia Iyo yakavakwa muzana ramakore rechi XNUMX pane zana ramakore rechiXNUMX mhirizhonga yechiMuslim. Mhando dzakasiyana dzekuvaka dzinogara mumuzinda, inotungamira iyo Mudejar maitiro, eakare kuvaka, uye iyo Renaissance. Iyo yemukati izere nemabasa ehunyanzvi akawanikwa neiyo imba inokudzwa. Mifananidzo nevanyori vechimiro cheZurbarán naFrancisco de Goya vanomira. Iyo gadheni ine sango re5000 m2 uye ndicho chimwe chezvishongo zvikuru zvechivakwa.
Nhasi, imba yamambo ndiyo dzimbahwe resangano risingabatsiri Fundación Casa Medina Sidonia uye Iyo inogara imwe yeanomiririra uye echokwadi hostel muSanlcarcar de Barrameda.
Muzinda uyu wakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX, sa kugara kwezhizha kweVatongi veMontpensier, Antonio de Orleans naMaría Luisa Fernanda de Borbón. Nhasi ndi chimwe chezvivakwa zvine mukurumbira muguta, inoshanda seGuta Kanzuru yeSanúcar de Barrameda.
Iyo dhizaini yekuvaka uye ayo akanaka mapindu anoigadzira rakasarudzika basa rehunyanzvi, Iyo neo-Mudejar dhizaini façade inopesana neyeItaly classicism iripo mune dzimwe nzvimbo dzemukati. Masitayera akadai saRococo, Egypt kana Chinese, aripo mune mamwe makamuri emuzinda.
Yakavakwa muzana ramakore regumi nematanhatu pasi pesimba reCasa de Medina Sidonia, Iyo Castillo De Santiago inomiririra yavo yekupedzisira Gothic maitiro uye yekuchengetedza, mufananidzo weTorre de Guzmán el Bueno kubva kuTarifa Castle. Iyo yakaoma yakashanda senhare yeducal uye yakashanyirwa nevanhu vakakosha vakamira muSarlúcar nekuda kwenzvimbo yaro ine rukudzo, saColón, Fernando de Magallanes uye kunyange Isabel la Católica iye.
Iyo Castillo De Santiago hapana mubvunzo kuti imwe yenzvimbo idzo iwe yaunofanirwa kuona muguta. Parizvino dzimba mukati me Costume Museum uye Weapons MuseumKuwana kune ese ari maviri kunosanganisirwa neyakajairwa tikiti yekubvuma kunhare. Uye zvakare, ine akawanda magadheni nemakamuri ayo anopiwa kuitira marudzi ese emhemberero.
Mhenderekedzo dzakanakisa muSanúcar de Barrameda
Sanlúcar iguta rinopa zvirongwa zvakawanda uye mikana yekuti, kunyangwe iri nzvimbo yemahombekombe, zvakakodzera kushanya kunyangwe munguva yechando. Zvisinei, Kana iwe ukaenda kuguta muzhizha uye uri kutsvaga kuti utize kupisa kwekumaodzanyemba, unogona kuenda kumahombekombe akanakisa muSanúcar de Barrameda, Nakidzwa nezuva uye utonhorere nekugeza kwakanaka.
Iri pamuromo peGuadalquivir, iri gungwa rinozivikanwa kwazvo nevanhu veko uye, zvinoshamisa, zvishoma zvinowanzoitirwa nevokunze. Zviri gungwa chairo, rakanyarara, rine jecha rakajeka uye akadzikama kwazvo mvura. Pedyo nemahombekombe, iwe uchaona zvikepe zvidiki, zviri zvevaredzi veko. Kunyangwe iri risiri iro rakanakisa gungwa kugeza, rakanakira kufamba, kunwa pabhawa uye nekunakirwa nemhepo yegungwa.
Mahombekombe eLa Calzada neLas Piletas
Mahombekombe ese ari maviri, ari padhuze nepadhuze, anogona kunge ari anozivikanwa kwazvo muSarlúcar. Makwikwi akakurumbira emabhiza anoitirwa pano muna Nyamavhuvhu, imwe yetsika dzakakosha kwazvo dzeguta.
Iyo nhanho yekugara kwemahombekombe aya anowanzo kuve akakwirira, asi zvakakodzera kuenda kwavari, kunyanya kana iwe uchida kutora mukana kune ese marudzi ezvivakwa uye zvinowanikwapo, paunenge uchifarira zvinoyevedza.
Kana iwe uri kutsvaga kuti ubve pamhirizhonga yeguta uye upedze zuva mune imwe nzvimbo isina kusimba, Playa de la Jara inokunakisa. Inowanikwa ingangoita maminetsi gumi nemashanu kubva pakati peSanúcar de Barrameda, gungwa iri rakanakira kunakidzwa nekushambira kwakanaka, patsanura uye nekutaurirana nemasikirwo.
Kunyangwe ichishaya masevhisi mazhinji uye zvivakwa, kunaka kwenzvimbo kunoigadzirira. Kazhinji hapana vanhu vazhinji, saka runyararo runovimbiswa, uye kutarisa kunyura kwezuva kuchizorora pajecha chiitiko chaicho. Ehezve, kana iwe ukaenda kumahombekombe aya ndinokukurudzira kuti upfeke bhutsu, kune matombo uye mhando yeshangu iyi inobatsira imba yako yekugezera kuti isashatise.
Iyo Plaza del Cabildo
Plaza del Cabildo ndiwo moyo weSarlúcar de Barrameda, Mabhawa, masitepisi uye maresitorendi anoparadzirwa kwakakomberedza uye chikamu chikuru chemuchadenga chakasimbiswa. Tsime repakati nemiti mikuru yemichindwe inokura mukati mekwere, inoiita nzvimbo yakasarudzika uye, pasina mubvunzo, chimwe chechiratidzo chenzvimbo iyi.
Iyo izere nehupenyu uye Kana iwe uchida kuziva tsika yeti tapas, ino nzvimbo ndiyo inofanira kuzviita. Ivo vane zino rinotapira vanozowanawo kwavo kwakakwana chirongwa pano, nekuti pakati pevagari vemunharaunda vakakomberedza mraba iwe uchawana mamwe emhando dzakanakisa eice cream muSanlúcar de Barrameda.
Semamwe maguta mazhinji emahombekombe, Kubata hove ndechimwe chekare uye chakanyanya kukosha zviitiko muSarlúcar de Barrameda. Kuziva kushambadzira kwehove inzira yakanaka kwazvo yekudzikisa tsika yeSanlucan. Kune icho hapana chinhu chiri nani pane kuenda ku Bonanza Musika.
Iri padyo nechiteshi, musika wehove ndiwo musimboti webhizimusi rekuredza hove. Iyo yakakamurwa kuita nzvimbo mbiri, imwe yakatsaurirwa kutengeswa kwehomwe-seine hove uye imwe yacho ku trawling. Iyo okisheni yehove iri, pasina mubvunzo, imwe yechokwadi kwazvo inoratidza kuti iwe unogona kupupura panguva yekushanya kwako kuSarlúcar. Iyo inopindwa nevatengesi vehove uye emabhizinesi emuno anonyorera kune yakanakisa michero nyowani. Kana iwe uchida kutsvaga iko iko kweguta, iwe unogona zvakare enda kune pari kuti uone hove dzichidzikisa.
Shanyira iyo Doñana National Park kubva kuSanúcar
Doñana National Park Ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kuchengetedzwa muSpain. Iyo yekuchengetera inoumbwa nemhando dzakasiyana siyana dzezvipenyu izvo zvinozvipa nekusiyana uye nzvimbo yakapfuma yakasarudzika muEurope. Sanlúcar de Barrameda ine rombo rakanaka kuve iri padyo nepaki uye Kushanya kuDoñana kwakarongeka kubva kuguta. Kana iwe uri kutsvaga kuona chimwe chinhu chinopfuura zvivakwa uye uchida kunakidzwa neasina kunyatso kusikwa chimiro, kubhuka imwe yeiyi mafambiro izano rakanaka.
Iyo paki inowanikwa neigwa, kuburikidza neGuadalquivir Uye, kunyangwe kufamba padyo nerwizi chatova chishamiso, kana iwe uchida kuziva ese ecosystems eDoana, iwe unogona zvakare kuhaya yese-terrain sevhisi, iyo inowanzo kuve neakasarudzika gwara, waunogona kushanyira nawo makona ese eizvi pfuma yepanyama.
Iwo zvikepe zvinobva kuBajo de Guía kumahombekombe uye kuyambuka Guadalquivir kuenda kumahombekombe enzvimbo yekuchengetedza zvisikwa. Kamwe ipapo, se enderera mumotokari dzese-nzvimbo uye utange rwendo kuburikidza nenzvimbo dzinoyevedza dzeDoana: mahombekombe, chena jecha mirwi, inochengetedza, matope ... Iyo nzira inopera pa «La Plancha», taundi rekare kwaigara vagari vepo vakambogara mupaki.
Igwa racho richakudzosera muSanlúcar, kuti iwe ugone kuenderera uchinakidzwa muguta. Saka ikozvino unoziva, kana iwe usingazive zvekuona muSarlúcar de Barrameda, ramba uchifunga kuti imwe sarudzo ndeyekuongorora zvakapoterera uye Iwe unogona kuita rwendo urwu muzuva rimwe chete.
Flamenco ndeimwe yemamiririri etsika eAndalusia. Zvisinei, kune maguta umo rudo rweiyi mimhanzi genre rwunofemerwa mukona yega yega, Sanlúcar de Barrameda nderimwe remaguta iwayo.
Kunakidzwa nekuimba nekutamba, MuSarlúcar kune vemuno vane hunyanzvi mukufambisa nekutaridza hunyanzvi hwenyika idzi. Kana iwe uchida kuswedera padyo netsika yeSarlúcar, haugone kuenda usina kushanyira imwe yemapuna uye uchiri hupenyu hunopa rudzi urwu rwekuratidzira (uye nezve izvo zvandinopa rumwe ruzivo pazasi).
Ndekupi kwandinogona kuona iyo flamenco show muSanúcar de Barrameda?
Zvichiri Hupenyu Kudzoka
Inowanikwa paCalle San Miguel, chingori maminetsi matatu kufamba kubva kuPalais d'Orléans, iyi kusanganiswa kwetsika tavern uye tablao inopa mushanyi mukana wekunakidzwa neyeakasarudzika flamenco show, inoitwa na nyanzvi maartist, apo uchiravira zvakajairika ndiro dzenzvimbo.
Flamenco kirabhu Puerto Lucero
Anenge mazana matatu emamita kubva kuCastillo De Santiago, paCalle de la Zorra, ndiyo Peña Flamenca Puerto Lucero. Iyi isiri-purofiti tsika yemubatanidzwa inoronga flamenco inoratidza. Kuunza pamwechete maartist kubva munzvimbo uye kubatsira vechidiki matarenda, iyo peña inovavarira kuratidza kuti flamenco inhaka inorarama yeSarlúcar uye vanoedza kupfuudza rudo rweiyi hunyanzvi kune wese anouya kune yavo tablao.
Rociera El Rengue Kamuri
Tapas, zvinwiwa uye mimhanzi mhenyu, iyo Sala Rociera El Rengue inzvimbo yakanaka kune avo vari kutsvaga kunakidzwa muSanúcar kubva kuBarrameda kuenda kune mutinhimira wema rumbas uye sevillanas. Inowanikwa pane calle de las Cruces, iyo nzvimbo inopa yakadekara mhepo iyo inokutendera iwe kuti usvike flamenco munzira yechokwadi uye yakasiyana nzira.
Kugadzirwa kwewaini, munhoroondo, chiitiko chakakosha chehupfumi cheSarlúcar de Barrameda. Kunyangwe paine wineries inotengesa waini kubva kumasangano akasiyana ezvakatangira (Jerez, Vinagre naBrandy de Jerez), Manzanilla ndiyo yakagara ichibatanidzwa netsika yeSarlúcar.
Es imwe yewaini yakakosha kwazvo pasirese, Iyo ine yakasarudzika hunhu uye inyika iyo kwainozvarirwa iyo inoipa iyo neakadai chaiwo ma nuances. Zviri yakanaka kuperekedza aperitif, Inodyiwa inotonhorera (pakati pe5º ne7º C) uye vaviri vaviri zvakanaka nezvikafu zvese zvinobva kugungwa uye, nerombo rakanaka, Sanlúcar inopa yakanaka kwazvo mbishi zvinhu, zvitsva uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa.
Ndine chokwadi chekuti ndatokukurudzira kuti uedze girazi reChamomomile, asi… Haungade here kuziva kuti inowanikwa sei? Waini yekushanya ndiyo yakanaka sarudzo yevanoda waini vanouya kuzopedza mazuva mashoma muguta. Kune ma winery anoronga kushanya kwevashanyi uye mavanotsanangudza maitiro ese ekugadzira yechinwa icho chave chiratidzo cheSanúcar.
Mamwe ma winery anoronga kushanya kune zvivakwa zvavo
Yakatangwa mu1972, Bodegas Hidalgo La Gitana ibhizinesi retsika iro rakapfuudzwa kubva kuna baba kuenda kumwanakomana. Ivo vane chikwereti mukurumbira wavo kune yavo nyeredzi chigadzirwa: "La Gitana" Manzanilla, imwe yeanonyanya kuzivikanwa muSanúcar de Barrameda.
Ronga kuravira kwemazuva ese nemhando dzakasiyana dzekushanya kwakatungamirirwa. Kugadziriswa kunogona kuitwa kubva pawebhusaiti yavo uye mitengo yacho inonzwisisika.
Kutaura nezveManzanilla «La Cigarrera» zvakafanana netsika. Kwakatangira waini iyi kunonzi kune mutengesi wechiCatalan uyo akazopedzisira agara muSarlúcar, VaJoseph Colóm Darbó, uye uyo muna 1758 akatanga imba yewaini mune imwe nzvimbo muCallejón del Truco.
Nhasi, anopfuura makore mazana maviri gare gare, iro bhizinesi rakura kuita «La Cigarrera» imwe yeManzanillas anotengeswa zvakanyanya. Kuunza tsika yeLa Manzanilla padhuze neruzhinji uye kufambisa rudo rwetsika uye nhoroondo yeSanlucan, varidzi veiyo winery vakasarudza kuvhura iyo kuruzhinji, vachipa Kutungamirirwa kwekushanya kwezvivakwa uye kusanganisira mairi a kuravira waini yavo yakanakisa. Kugadziriswa kunogona kuitwa kubva kunhare yavanopa pawebhusaiti yavo.
Yakavhurwa muna 1821, Bodegas Barbadillo haingopa chete kutungamirwa kwekutariswa kwezvivakwa uye zvinonaka, asiwo Ivo vane miziyamu yakatsaurirwa kune nhoroondo uye kugadzirwa kweManzanilla muSarlúcar. Pakati pemabharani, ivo vanokupa iwe rudo rwezvavanotsanangura se "nzira yehupenyu" uye vanokuunza padhuze netsika yenzvimbo yacho nenzira yakasarudzika.
La Manzanilla Solear ndiyo waini inozivikanwa kwazvo yewaini uye yakave inozivikanwa nekupfekedza uye kuratidza chikamu chikuru chetsika dzeAndalusian fairs.
Kwatinofanira kudya muSanúcar de Barrameda
Gastronomy ndiyo imwe yeakanyanya kushanya munzvimbo. Sanlúcar yakave inozivikanwa nekupa yakanakisa zvigadzirwa zvegungwa, kuve iyo prawn nyeredzi chigadzirwa. Iko kuravira kwehove, kunakirwa kwekunakirwa kwakakangwa-kwakanaka uye chikafu chegungwa chakabatanidzwa newaini, chinoita Sanlúcar gastronomy mumiriri wetsika yekubika yeCádiz.
Saka kuti iwe usabve usina kunakidzwa nechikafu chakanaka cheSarlúcar de Barrameda, ndinopa pazasi pevamwe akanakisa mabhawa uye maresitorendi muguta.
Inowanikwa muBajo de Guía, Iresitorendi iyi yakavhurwa kubvira 1951 uye ndeimwe yenzvimbo idzo mucherechedzo wetsika uye kugona. Chipo chayo chegastronomic chinoenderana nezvigadzirwa zvemuno, hove dzegungwa uye hove nyowani dzemhando yepamusoro, dzakabikwa zvakanaka uye munzvimbo yakasarudzika.
Bhawa Casa Balbino
Izvo zvakatanga sechitoro nhasi ndicho chimwe chezita rezariro muSarlúcar de Barrameda. Iyo yakasarudzika shrimp omelette iyo yakagadzirirwa mumakicheni avo yakunda dumbu revagari vekunze nevatorwa. Kuremekedza chigadzirwa uye chikafu chinowanikwa chenzvimbo idzi ndidzo mbiru dzinochengetedza chakanakisa gastronomic kupihwa uye kubudirira kwayo.
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoda zvechokwadi, ino nzvimbo inokufadza iwe. Kure kure nemhirizhonga yepakati, iyi tavern ndiyo yakajairwa nevanhu veko. Mune maonero angu, Rincón Bético inopa yakanakisa hove dzakabikwa mutaundi, nyowani, crispy uye nemutengo mukuru. Iyo yose yakakangwa cuttlefish ndiyo nyeredzi yayo dhishi, inonetsa kuwana mune mamwe masisitendi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Chii chaungaona muSarlúcar de Barrameda